ब्ल्याङ्क चेक - khabarpatro
अलिकति अफ्ठ्यारो, कोल्टे, भकुण्डे अनि हरेक कुरामा नकारात्मक देख्ने, सोच्ने र लेख्ने बानी देखेर मेरा प्रिय पात्रहरु मसँग वाक्क र दिक्क भइसकेका छन् भन्ने कुरा मलाई राम्ररी थाहा भइसके पनि देखेको कुरा भन्ने र लेख्ने बानीले आफ्नै घर भाँडिएला भन्ने चिन्ता मलाई नभएको होइन। यस्ता केही रमाइला प्रसङ्गहरु टटोल्ने जमर्को गर्दैछु ।
हाँस्नु स्वस्थ्यका लागि अत्यन्त उत्तम छ तर अरुमा भन्दा आफैँमा हाँस्नु चाँही झनै उत्तम मानिन्छ। अरुले घुस खाएको हेर्नु भन्दा आफैले खाएको राम्रो हो नि ! हैन र ? प्रायः मानिसहरु भन्ने गर्छन नि हेर त त्यो खरदार विस हजारको जागिर खाँदा सम्म केही थिएन, ऐले तीन तले घर पो बनाएछ अरे! भन्सारमा काम गरेर खूब कमायो...आदि !!
यो सोचमा भयंकर रिस, डाहा अनि अरुलाई नीच देखाउने अभिव्यक्ति हो भन्ने मलाई किन लाग्छ पायो त खायो, प्रमाण छ भने कोच !!! सक्छौ भने तिमी पनि सोच । देश बनाउँछ भनेर लठ्ठी, जेल, नेल खाने नेताहरुले सुख सयल गरे भन्छन् लठुवाहरु !! जेलको हावा खानेले के जीवनभर हावा नै खानु पर्ने? बिचरा नेताहरु जेलमा तेल घस्न पाएनन, ऐले नेपाली जनताका ढाडमा तेल घसेर महँगी रुपी डण्डा हान्दैछन् त के बिराए ? के गल्ती गरे ?
जनताका ढाडमा तेल घसेर डण्डा बर्साउने नेताहरुको नैसर्गिक अधिकार भित्र पर्छ। यति पनि थाहा छैन । कुनै पार्टीको नेताले मान्छे मारे क्रान्ति हुन्छ अरुले त्यही काम गरे देशमा अशान्ती हुन्छ। नेताहरुको काम भनेको राम्रो काम गर्नु र गर्न लगाउनु हो भन्ने कुरा हेक्का नराख्नेहरुले विरोध गर्ने हो।
अब एक क्षण ग्यास र तेलको मूल्य वृद्धी कै कुरा गरौँ, ग्यास र तेलको मूल्य वृद्धीले देशमा समृद्धी आउँछ भन्ने कुरा पनि थाहा छैन लण्ठुहरुलाई। सत्ताधारी नेता हुन् या विपक्षमा डण्डा बैठक गरिरहेका र सत्ताको भोकमा छटपटाईरहेका नेता हुन्, दुबै हाम्रा लागि समान छन् भन्ने महान सोच नेपाली जनताले सोच्नु पर्छ।
तेलकोे मूल्य वृद्धीबाट प्राय रकम जनताका लागि नै खर्च हुने हो किनकि जनता भनेका नेता हुन् नेता भनेका हामीले छानेका महान नेता हुन् । पेट्रोल र डिजेल धनीहरुले प्रयोग गर्ने गर्दछन् यसैले यस्मा भाउ बढाउनु भनेको धनीलाई गरिबको स्थितिमा ल्याउने हो । मट्टीतेलमा भाउ बढाउँदा खासै फरक पर्दैन किनकि त्यो पदार्थ गाउँघरमा गरिबहरुले प्रयोग गर्दछन् जसलाई खासै केही थाहा हुदैन। चुनावमा उनीहरुलाई पैसाँको बलमा आफ्नो पक्षमा गर्न सकिन्छ।
देशमा यति ठूलो बेथिति छ, वकिल साहबहरु, न्यायाधिसहरु हडताल, नारा जुलुस, हुँकार, फुँकार आदि गरिरहनु भएको छ। वहाँहरुलाई थाहा छ कुनैपनि परिवर्तन ,जुलुस, हडताल र तोडफोडबाट मात्र सम्भव हुन्छ नेपालमा, चाहे व्यक्ती होस् वा व्यवस्था । यस्तै नारा र जुलुसबाट त राजा फालिए भने अरु के कुरा गर्छन् यी पाँडेहरु । अदालतको मानहानी कसरी हुन्छ ? अब न्यायाधिसहरुले भन्नु होला नहोला यो एउटा पाटो छ तर हामीले टाटो त लगायसकेका छौ। कुनै पनि कुराको प्राप्ति हडताल, जुलुस र तोडफोड र हत्याबाट मात्र सम्भव हुन्छ भन्ने कुराको नजिर त बसिसकेको छ ।
हाम्रा प्रतिनिधि महान नेताले विगतमा गरेको दुःख यो पंक्तीकारलाई राम्ररी थाहा छ चाहे ति प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा हुन वा कृष्ण प्रसाद सिटौला वा अरु कुनै । वहाँहरु भनेको हामीले दिएको ब्ल्याङ्क चेक हो, जे चाह्यो त्यो गर्छन्। मात्र हामी मूक दर्शक...!!
सत्ताशीन नेता र तिनका कार्यकर्ताहरुको दुःख दर्द अर्कै छ। कुनै पनि मन्त्रीहरुको जिल्ला भ्रमणमा मन्त्रीलाई भेट्नेको तँ छाड म छाड हुन्छ, सुरक्षाकर्मीहरु सजग भएपनि मन्त्रीको अगाडि फोटो खिचाउने र त्यही फोटो देखाएर जिल्लामा धाक जमाउने कार्यकर्ताहरुको लामै लर्को हुन्छ। हुन त खुशी कै कुरा हो आफ्नो पार्टीको मान्छे भएकोमा । मन्त्रीलाई आफ्नो प्रभावमा पार्न र आगामि निर्वाचनमा उनको हनुमान हुनेहरुको ठूलै जत्था हुन्छ। पार्टीका कार्यकर्ताहरुको एक सुत्रीय उद्येश्य मन्त्रीलाई खुशी पार्नु नै हुन्छ, पार्टीका काम र पार्टीबारे चिन्तनको वास्था गर्ने काम त अरुको हो, वेकम्माहरुको भन्ने सोच्दछन्– यो महान मन्त्रलाई आत्मसात गर्दै वर्तमान मन्त्रीहरुको जत्थाले विकास र समृद्धिको धारा पेट्रोलबाट शुरु गरेर प्रहरी पजनीमा अन्त्य गर्दछ, किनकि निर्वाचन नजिक छ।
अझ गृहमन्त्रीको जिल्ला भ्रमणले त तहल्का नै मच्चाउँछ, विशेष गरेर हिजोका खराब आजका महान कार्यकर्ताहरु गृहमन्त्रीलाई भगवान भनेर पूजा गर्छन्, त्यो पूजा चांही नक्कली नै हुन्छ, सक्कली पूजा त गृहमन्त्रीको पार्टीलाई गर्नु पर्ने हो । गृहमन्त्रीसँगै हिड्ने ठुटे कार्यकर्ता दायाँ बायाँ हेर्दै फोटो खिचाउँदै अभिवादन गर्दै हिँडेको देख्ने यो पंक्तिकार लाजले भुतुक्कै भएको छ।
जिल्लाको प्रहरी प्रशासन हैरान!! कुन ठुटे नेताले पोल लगाउने हो भनेर। आफ्नो कर्तव्य पालनामा यो उ पार्टी, नेता वा कार्यकर्ता नभन्ने कर्तव्यनिष्ठ प्रहरीहरु जहिले पनि तनावमा देखिन्छन्। कुन बेला कहाँ सरुवा हुने हो आफैँलाई थाहा हुदैन। के गर्नु ? मन नपरे पनि मनले नमाने पनि त्यो ठुटे कार्यकर्तालाई पनि सलाम ठोक्नु पर्ने बाध्यता छ। मन्त्री यी सब कुराबाट अनविज्ञ भने छैनन्, उनलाई सबै थाहा छ तै पनि बाध्य छन् भोलीको निर्वाचन छ कर्तव्यष्ठि कार्यकर्ता अन्त जाँदैनन्, जिताउने भनेको यिनै झोलेहरुले नै हो। यसैले यिनका कुरा मान्नु पर्दछ।
प्रकाशित मिति :मंसिर ८, २०७८ बुधवार - १५:१०:१० बजे